ဂူဂဲလ်၏အွန်လိုင်းဂိမ်းပလက်ဖောင်းအသစ် Stadia ရောက်ရှိလာသည် Gadget သတင်း
Rafa Rodríguez Ballesteros | | ဖြစ်ရပ်များ, ယေဘုယျ, တင်ပြချက်များ
ကျနော်တို့ကကြေညာခဲ့သည် မြို့တော်ဂျီကုမ္ပဏီကြီးသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုစိတ်ဝင်စားမှုမတိုင်မီအချိန်သည်ကိစ္စသာဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီလများကခန့်မှန်းခဲ့သည့်အတိုင်းထိုအချိန်သည်ရောက်လာပြီ။ Stadiaဂူဂဲလ်သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းကမ္ဘာထဲသို့အပြည့်အဝဝင်ရောက်နိုင်သည့် "gamers" အတွက်ပလက်ဖောင်းအသစ် ပြီးသားအဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုကောင်းတာလား၊ ပိုဆိုးတာလား ဘယ်သူမှလစျြလြူရှုမထားပါဘူး.
Finalmente ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဂူဂဲလ်ခလုတ်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လူအများအပြားအတွက်ဂူးဂဲလ်သည်ဤစက်ရုံကိုမည်သည့်အရာဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်ကိုမြင်လိုသောကြောင့်စိတ်ပျက်ရသည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ မည်သည့်မျက်နှာပြင်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်၏ကစားပွဲအားလုံးကိုကစားနိုင်ခြင်း၏သဘောတရားသည်အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးလူကြိုက်များသည်။ Google ကနိူင်ငံရေးတစ်ခုခုနှင့်တင်ဆက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။
1 Stadia ဟာ console တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး ... ဒါပေမယ့်ငါတို့ကြိုက်တယ်
3 Stadia ကိရိယာများမရှိတော့ပါ
4 Stadia အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသေးသောအရာ
Stadia ဟာ console တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး ... ဒါပေမယ့်ငါတို့ကြိုက်တယ်
Google သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်တွင်ရှိနိုင်သည့်အလားအလာကိုသိရှိပြီးအရေးကြီးသောအရာတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ မီဒီယာအမျိုးမျိုးတွင်သူပြသရန်လာမည့်အရာသည်ဆင်တူသောအရာဖြစ်သည်ဟုအပတ်ပေါင်းများစွာပြောဆိုခဲ့ကြသည် ဂိမ်းတစ်ခု Netflix။ ဒါပေမယ့်ဒါကတစ်ခုပါ ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဂိမ်းများအတွက်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ယူနီဖောင်းစျေးနှုန်းများပြောဆိုခြင်းပင်မရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရေတွက်နိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားကိုသေချာစွာ ပြော၍ မရပါ။
ဂူးဂဲလ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးပို့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ရာ အလွန်ရှင်းလင်းသောအယူအဆ။ အနာဂတ်မှာ၊ ငါတို့တစ် ဦး console ကိုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ငါတို့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကစားရန်။ တီဗွီပေါ်ကလက်ပ်တော့ပ်မှာကစားတဲ့ဂိမ်းကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ငါတို့ထွက်သွားတဲ့အခါစမတ်ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကိုလိုက်ကြည့်ပါ။ အခြေအနေနှစ်ခုလုံးကတကယ့်အောင်မြင်မှုလို့ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသေးစိတ်ခံရဖို့အများကြီးအသေးစိတ်ကို အခုအချိန်မှာ
Stadia ကကမ်းလှမ်းပေးမည့်ဂိမ်းအကြောင်းပြောရရင်နောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုကတော့ တစ် ဦး မျှဝေမျက်နှာပြင်ရှိခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေ။ ဂိမ်းပေါ် မူတည်၍ ယခုအချိန်အထိရှုပ်ထွေးပုံရသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ Stadia ကဒီအတားအဆီးများကိုမကြာမီဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးဂိမ်းကစားသူများကကြိုဆိုကြလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းဤရွေးချယ်မှုကိုကမ်းလှမ်းရန်လိုအပ်သောကွန်ပျူတာစွမ်းအားသည်မရနိုင်ပါ။
ဂူဂဲလ်သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းကမ္ဘာတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ကဏ္ in ၏စံနှုန်းဖြစ်သောကုမ္ပဏီများရှိခဲ့သည်။ ဂိမ်းလောကရှိစက်ရုံငယ်လေးများကထည့်သွင်းပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်, ဂူးဂဲလ်သည်တီထွင်သူများထံဖန်တီးထားသောသတင်းများအားလုံးကိုပေးသည် Stadia ၏ဖန်တီးမှုတွင်ပူးပေါင်းသောကုမ္ပဏီအားလုံး၏။ ဤနည်းအားဖြင့်ကြီးမားသော G ၏အလားအလာအားလုံးနှင့်အတူ၎င်းပလက်ဖောင်းအသစ်အတွက်အကြောင်းအရာဖန်တီးရန်သေချာသည်။
ပရိသတ်တွေနှစ်သက်တဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုက သင့်ရဲ့ဂိမ်းဝေမျှနိုင်ပါလိမ့် ကျန်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းထဲမှာအခြားကစားသမားများ၏ပေါင်းစည်းမှုအလိုအလျောက်ပြုလိမ့်မည်။ ပြီးတော့သရုပ်ပြဗီဒီယိုမှာတွေ့ခဲ့ရသလိုပဲ ဆက်ကပ်အပ်နှံခလုတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကက။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကစားပွဲတွင်အခြားကစားသမားများကိုဖိတ်ကြားနိုင်ခြင်းသည်အလိုလိုသိပြီးလျင်မြန်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့အားလုံးအထက် ကျနော်တို့ကပလက်ဖောင်းသူ့ဟာသူကနေလုပ်နိုင်ပါတယ် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းကိုရပ်တန့်ရန်မလိုဘဲ။
ဤကဲ့သို့သောရွေးချယ်စရာများကိုကစားသမားများပျံသန်းခြင်းတွင်ကစားခြင်းကိုထည့်သွင်းရန်အနည်းငယ်ရှိမှသာစိတ်ချနိုင်သည်။ ဂူးဂဲလ်လည်း၎င်းတို့ထဲတွင်ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် Stadia တွင်အချို့ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းမနေ့ကတင်ဆက်မှုတွင်ကြေငြာခဲ့သည် တစ်ခုချင်းစီကိုဂိမ်းများအတွက်တိကျတဲ့လမ်းညွှန်များ။ မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များကမှထင်ကြေးခဲ့သောအရာတစ်ခုခု။ ဒါပေမယ့်ငါတို့မှာမရှိခဲ့ဘူး ဂိမ်းထဲမှာလမ်းညွှန်သူ့ဟာသူ၏ပေါင်းစည်းမှု။ ဒါကကိုယ့်ကိုကိုယ်ကမ်းလှမ်းဖို့ကူညီလိမ့်မယ် ကျနော်တို့စတင်နေသောအတွက်အတိအကျယခုအချိန်တွင်« Solutions »။ ငါတို့ချစ်သောနောက်ထပ်အောင်မြင်မှုများ
Stadia သည်အနည်းဆုံးတော့ယခုထက်ပိုသည် အလွန်ကြီးစွာသောအယူအဆရေးရာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်အတူဂိမ်းများအတွက်ပလက်ဖောင်း သတ်မှတ်ခံရဖို့အများကြီးရှိပါတယ်သောအကြောင်း။ Google ကဲ့သို့အရွယ်အစားကြီးမားသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခု။ ပြီးတော့ဂူဂဲလ်ကငါတို့ကမ္ဘာတစ်ခွင်ရှိဒေတာစင်တာများကိုအခြေခံသည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ ယနေ့သူ၏အကြိမ်ကြိမ်အထပ်ထပ်ပြုခဲ့သည့်ဆောင်ပုဒ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် "ဒေတာစင်တာသည်သင်၏ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်".
အစပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲဂူးဂဲလ်ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်တစ်ခုဖန်တီးဖို့အလောင်းအစားလုပ်မထားဘူးဆိုတာသိရတာကအချို့ကိုစိတ်ပျက်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့အဆိုပြုထားသောစိတ်ကူး အခြားကိရိယာတစ်ခုမလိုအပ်ပါကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂိမ်းပရိတ်သတ်များနှင့်ပိုမိုအခြေခံကျသောနည်းပညာအသုံးပြုသူများသည်တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးစက်ပစ္စည်းနှစ်ခုသုံးခုအထိသုံးနိုင်သည်။ အနည်းဆုံးနှင့်နီးပါးသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်းကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုကြသည်။ ဒါကိုနားကြပ်အချို့ထည့်လို့ရတယ်။ ထိုအခါ Laptop နှင့်ကျွန်တော်ကစားချင်လျှင်, console ကိုလည်း။
ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုလုံး ၀ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့မဖယ်ရှားနိုင်သော်လည်းထိန်းချုပ်သူ။ The Stadia ထိန်းချုပ်သူမည်သည့်ပုံများပေါက်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်ခဲ့သည်။ နှင့် ရိုးရာဒီဇိုင်း နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုဖုံးကွယ်ထားတယ် Youtube ကိုတိုက်ရိုက်ဂိမ်းကိုမျှဝေဖို့ခလုတ်, ဒါမှမဟုတ် အသံလက်ထောက်။ ရလိမ့်မယ် USB Type C မှတစ်ဆင့်အားသွင်းပါဆက်သွယ်မှု ဝိုင်ဖိုင်, ဆိပ်ကမ်း နားကြပ်ပေါက် သုံး အရောင်ချိန်ညှိချက်များ.
ဘယ်လိုကြည့်တယ် "ဖျက်ရန်" ကိရိယာများသည်အခြားနည်းလမ်းများဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲဂိမ်းကစားခြင်းသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ console မလိုအပ်ဘဲယခုအချိန်အထိနှင့်အခြားသောအရာများကဲ့သို့တူညီသောဂိမ်းများကိုကစားနိုင်ခြင်း။ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကမိုဘိုင်းဖုန်းကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတိုင်း၊ ဂိမ်းကိုရှုံးနိမ့်ခြင်းမရှိဘဲလုပ်နိုင်တာကဒီအချက်ကိုပဲလိုက်နာခြင်းကပိုကောင်းအောင်လုပ်သည်။ အဘယ်သူမျှမသေတ္တာများ, downloads, အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်.
တိုးတက်မှုကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတွေ့မြင်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ Stadia ဟာကြီးမားတဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်ရုံမှာမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်ဖြစ်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ အသုံးပြုသူများအဘို့အစဉ်အမြဲအပြုသဘောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတစ်ခုကြိုတင်ငွေ။ ထို ငါတို့စောင့်နေတယ် Que ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အများဆုံးတိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်နိုင်အောင်ဝတ်ပြုကြလော့ မိုက်ခရိုဆော့ (သို့) ဆိုနီမှတ်ချက် တိုးတက်မှုများနှင့်သူတို့ကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးစားပါ။ ရှင်းပါတယ် စက်မှုလုပ်ငန်းအပြောင်းအလဲများသည် ကျန်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေက Google ကိုဒီအဆင့်အသစ်မှာလိုက်နိုင်မနိုင်ဆိုတာကိုငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်။
အတော်လေးဖျော်ဖြေမှုနှင့်တက်ကြွသောတင်ဆက်မှုအပြီးတွင်မေးခွန်းများစွာသည်ပိုက်လိုင်းတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါတို့နဲ့နေတယ် အတော်ကြာတကယ်အရေးကြီးသောသံသယ။ နွေရာသီတွင် Stadia ၌ရှိမည့်ဂိမ်းများ၏ကိန်းဂဏန်းများကိုပိုမိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဂူဂဲလ်မှနေရာချသည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုမပြောရသေးတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ထဲမှာအများကြီးအရေးကြီးတယ်။ ဤရက်သတ္တပတ်များအတွင်းသံသယကြီးစရာများထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်လေထဲတွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး Stadia ၏စီးပွားရေးအဆင့်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
လစဉ်ကြေးပေးသွင်းမှုဖြင့်အလုပ်လုပ်မလား လစဉ်ကြေးပေးပြီး Stadia ကိုသုံးနိုင်မလားမသိဘူး။ နှင့်သင်တန်း၏, ငါတို့အကြောင်းပြောနေတာလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်လျှင်လျှင်, ငါတို့မသိ။ ဒီဟာကမရှင်းသေးဘူး အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ၎င်းသည်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုမဟုတ်ပါကဂိမ်းများကိုဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂိမ်းတစ်ခုစီ၏“ ငှားရမ်းခြင်း” ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဂူဂဲလ်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအများကြီးမရှင်းပြခင်အထိ ဆက်၍ ပြုလုပ်မည်ဟုထင်မြင်ယူဆချက်များ။
အလွန်အရေးကြီးသောအချက်များနောက်တစ်ခု၊ ဆက်သွယ်မှုမြန်နှုန်းအတွက်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ Stadia ကိုသုံးနိုင်ဖို့လိုတယ်။ အထူးသဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောဆုံးဖြတ်ချက်များကို FPS တွင် 4K HDR ၏တင်ပြချက်တွင်တင်ပြထားသည်။ ဂူးဂဲလ်ပလက်ဖောင်းအသစ်အားတီးခတ်နိုင်မနိုင်သိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်ဆက်သွယ်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်တစ်ချက်။
ပြီးတော့ဂိမ်းကစားသူပရိသတ်တွေအတွက်တော့ဒါပဲ ဂိမ်း catalog ကိုသိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် ငါတို့ရေတွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီသဘောနဲ့ Google ကနွေရာသီမှာကျွန်တော်တို့ကိုကိုးကားတယ်။ ဒီတော့မနေ့ကလေထဲမှာကျန်နေသေးတဲ့ဒီလူမသိတဲ့လူများစွာကိုရှာဖို့လပေါင်းများစွာစောင့်ရ ဦး မယ်။ သိလောက်စရာများလွန်းသောအရေးကြီးသည့်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်လောင်းကစားခြင်းသည်အန္တရာယ်များပုံရသည်။ ကျနော်တို့ပြထားတဲ့အယူအဆကိုချစ်ပေမယ့် နှင့်တိုးတက်မှုကျနော်တို့ဂိမ်းနှင့်နည်းပညာအဆင့်မှာသိသိသာသာရှိပါတယ် Stadia အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်စောင့်ဆိုင်းနေပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » ဂူဂဲလ်၏အွန်လိုင်းဂိမ်းပလက်ဖောင်းအသစ် Stadia ရောက်ရှိလာသည်